Macdanta - Newsway Valve Co., Ltd.
Macdanta waxaa loola jeedaa soo saarista macdanaha si dabiici ah u dhaca sida adkaha (sida dhuxusha iyo macdanta), dareerayaasha (sida saliidda ceyriinka ah) ama gaaska (sida gaaska dabiiciga ah). Oo ay ku jiraan dhulka hoostiisa ama kor ku xusan-dhulka macdanta, hawlgalka miinooyinka, iyo kulli shuqulkii kaabayaal ah, sida ku shiidi, beneficiation iyo daaweynta, kuwaas oo guud ahaan ku qaadeen meel u dhow goobta miinada ama goobta si loo farsameeyo alaabta ceeriin, waa hawlaha noocan ah.
NEWSWAY VALVE waxay siisaa xalalka warshadaha macdanta waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta nabadgelyada deegaanka, xaaladaha shaqada ee dhuumaha geedi socodka, saldhigga saldhigga & adeegga adeegga waalka, iyo yareynta waqtiga dhimista ee ay sababaan dayactirka.
NEWSWAY VALVE waxay siin kartaa biraha iyo macdanta warshadaha leh baaldiyo adag oo birta fadhida oo u adkaysta bey'adda waxqabadka badan. Farsamooyinkayaga 'autoclave' waxay leeyihiin guul si buuxda loogu fuliyay codsiyada dhuumaha qulqulaya ee adduunka oo idil.
Suuqa Codsiyada ugu muhiimsan:
Ka Faa'iidaysiga iyo Macdanta Macdanta Birta
Ka Faa'iidaysiga iyo Falanqaynta Miinada Aluminium
Ka-faa'iideysiga iyo Ka-shaqeynta Miinada 'Nickel'
Ka Faa'iidaysiga iyo Maaraynta Maarta
Cast Albaabka Gate Madax